Kooxaha Dekedda vs Heegan… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka weyn ee maanta laga ciyaarayo horyaalka Somali Premier League) – Gool FM
Kooxaha Dekedda vs Heegan… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka weyn ee maanta laga ciyaarayo horyaalka Somali Premier League)
Haaruun March 16, 2020
(Muqdisho) 16 Mar 2020. Kooxaha Dekedda FC iyo Heegan ayaa galabta ku ballansan garoonka Eng Yariisow Stadium, ciyaar qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League xilli ciyaareedkan 2019-20.
Kulankan ayaa ah mid aad u xiiso badan waana kulankii 12-aad ee laga dheelayo horyaalka kal ciyaareedkan.
Wiilasha Dekedda ayaa ku taamaya inay dib ugu laabtan hoggaanka horyaalka oo iminka loogu hayo hal dhibcood oo qura, waxayna galabta rabaan inay kala diraan Heegan, halka kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed ay rabto inay kaalmaha sare soo gasho.
Shantii kulan ugu dambeysay ay labadan kooxood isku arkan horyaalka waxaa labo ka mid ah badisay naadiga Dekedda FC, halka saddexda kulan kale barbaro ay ku kala baxeen, taas oo ku muujinaysa in Heegan laga firfircoon yahay marka loo eego saddexdii dheel ee ugu dambeeyay ay isku wajahaan horyaalka Somali Premier League.
Difaacyaasha Horyaalka Somali Premier League ee Dekedda kulankii ugu dambeeyay waxa ay 3-1 ugu soo taqaluseen naadiga Gaadiidka FC.
Dekedda kulan galabta waxaa dhaawac ugu maqnaanaya Idiris Aamiin Cali kaas oo dhaawac soo gaaray kulankii ugu dambeeyay ay kooxdiisa la dheesho naadiga Gaadiidka, waana markii labaad uu dhaawacmayo xiddiga xili ciyaareedkan 2019-20.
Kooxda kubadda cagta Heegan kulan ciyaareedkii ugu dambeeyay waxay guuldarro 1-0 kala soo kulantay naadiga Midnimo, taasoo ka micno ah, iyadoo guuldarro wadata inay fooda dari doonto kooxda Dekedda oo guul wadata.
Wiilasha Heegan kulan ciyaareedkan galabta waxay dib u heli doonaan xiddigaha kala ah Mahad Baseey iyo Goolhaye Cabdiraxmaan, kuwaas oo kaararka digniinta ah uga maqnaa kulankii ugu dambeeyay ay dheesho kooxdan.
Labadan kooxood ayaa ku kala jira kaalmaha kala sarreynta horyaalka 5-aad iyo 4-aad Dekedda ayaa ku jirta kaalinta afaraad iyadoo leh 21-dhibcood kaliya hal dhibcood ayaa loogu haya hoggaanka horyaalka, halka Heegan ay leedahay 17-dhibcood, waxayna fadhisa kaalinta shanaad ee horyaalka, haddii ay galabta ka adkaato Dekedda hal dhibcood ayey u jirsanaysa Kooxda Dekedda.
IS-ARAGA LABADA KOOXOOD:-
08/01/2020 Dekedda SC 2 : 1 Heegan S.C
28/03/2019 Heegan S.C 1 : 1 Dekedda SC
29/06/2019 Dekedda SC 1 : 0 Heegan S.C
12/03/2018 Heegan S.C 0 : 0 Dekedda SC
02/05/2018 Dekedda SC 1 : 1 Heegan S.C
Kooxaha: Heegan FC vs Dekedda
Saacadda: 3:30 Galabnimo saacadda geeska Afrika.
Qiimaha Kulanka: Waa Lacag La’aan
“Waxay noqon doontaa niyadjab haddii ay Liverpool sidan ugu guuleysato Premier League” – Van Dijk
Kooxda Barcelona oo caddeysay qorshaheeda Aubameyang & Arsenal oo diyaar u ah iibintiisa